Zim Ex-minister exposes Zanu-Pf's role in Journalist Itai Dzamara's 2015 disappearance - Josey News
Zim Ex-minister exposes Zanu-Pf’s role in Journalist Itai Dzamara’s 2015 disappearance
Zimbabwean self-exiled former Minister of Higher and Tertiary Education Professor Jonathan Moyo says he regrets comments he made during his time as Minister of Information about the disappearance of Itai Dzamara as they were informed by a security reports.
Moyo said the security report was presented to the cabinet by then Minister of Home Affairs Kembo Mohadi who said Dzamara’s disappearance was staged to pressurize the Zanu PF party.
In an interview with Magamba TV’s Take Down, Moyo said said, “Where is he, I wish I knew where he is, the record will show that when he disappeared in 2015, I was Minister of Information, and in May 2015 in an interview on Hard Talk, I made remarks about him or his whereabouts which were most unfortunate and very regrettable and I expressed my regret while I was still in government in June 2016,” he said.
The self-exiled former minister noted that Mohadi gave the report on behalf of the Zimbabwe Republic Police insisting that Dzamara’s disappearance was an opposition party’s inside job.
Zimbabwe: “Mwonzora Is Just A Caretaker In Zanu-Pf…
Moyo further alleged that his father was abducted in the same manner before being tortured and killed.
Zimbabwe: “Mwonzora Is Just A Caretaker In Zanu-Pf Waiting Room”, Says…